LIISKA Ilyushin Il-76 MD FSX & FSX-Steam - Rikoooo
downloads 29 836
Halkan waxaa ah Ilyushin Il-76 MD for FSX oo tayo aad u sarreeya leh, roogaga dalwaddii si buuxda u qaabeysan oo leh cabbirro ku yaal 3D iyo qoraallo HD, shaqo cajiib ah! Xidhmo dhameystiran.
Waayo, version ah xitaa buuxda for FS2004 riix halkan
The Il-76 arkay adeegga ballaaran sida Markab ganacsi xamuulka sagxada-ka samatabbixiyey, gaar ahaan waxyaabaha outsized ama culus awoodin in la si kale qaadeen. Waxa kale oo la isticmaalo sida gaadiidka ah jawaab degdeg ah ka bixidda markay dadka rayidka ah iyo sidoo kale gargaarka bani'aadamnimada iyo in gargaarka musiibo adduunka oo dhan. Sababta oo ah awoodda ay ku shaqeeyaan runways kaga dagnaa, waxa uu ahaa mid waxtar leh in meelaha kobcin.Waxa. daydo khaas ah ayaa sidoo kale soo saaray tababarka la dirirka iyo eber-G anteenada .. (Wikipedia)
MUHIIM: ee Ilyushin II-76 in ay si fiican u shaqeeyaan oo ay ka fogaadaan qaladka "ma ku shuban yaabaa cabirrada /sc_acc.dll" waxaa lagama maarmaan ah in ay soo baxdo iyo rakibi version ugu dambeeyay ee eeg KLN90B ah, rakibidda eeg this waxaa looga baahan yahay hal mar oo keliya per Aadan Qabille.